Finfinnee Oromiyaa Irraa Adda Baasuuf Tarkaanfiin Fudhatamaa Jiru Yakka Oromummaa Irratti Raawwatamaa Jiruu fi Gochaa Seeraa Alaa Ti.
(Ibsa Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) Irraa Kenname)
Mootummaan Wayyaane akeeka isaa guddicha kan Oromoo Finfinnee keessaa haxaawuu fi Finfinnee Oromiyaa irraa adda baasuu bakkaan gahachuuf itti cichee hojjachaa jira. Waajjirootni mootummaa naannoo Oromiyaa mi'a isaanii xaxatanii Finfinnee keessaa akka bahan ajajni inni dhumaa itti kennamee humnaan hojii irra oolfamaa jira. Finfinneen galma Oromootaa abbootiin keenya nu dhaalchisan keessaa tokko ta'uutti dabalee giddu galeessa dinagdee, hawaasummaa fi siyaasa Oromoo taatee jirti. Finfinneen handhuura Oromiyaa waan taateef, Oromiyaan Finfinnee malee jiraatti jechuun waan yaadamu miti. Kanaaf yoom illee Oromiyaa qaamni irraa murmuramte hin fudhannu.
Finfinneen ijaarsa ammayyaa adda addaa kan of keessaa qabduu fi addunyaa biraa wajjin kan walitti nama fiddu wiirtuu lafaa ti. Magaalaa guddittii dafqaa fi qabeenya dhaloota Oromoon ijaaramte, bakka dinagdee fi daldalaa guddaan itti adeemsifamuu dha. Bakka murteessaa fi waltajjii idil addunyaa ta'e kana irratti mirga abbaa biyyummaa Oromoon qabu haaluun ta'e jedhamee ummata Oromoo moggeessuu fi qophxeessuuf shira xaxamuu dha. Kun qaama Oromiyaa hammeenyaan muruu dha.
Warri Abisiiniyaa gargaarsa biyyoota Awurooppaa irraa argataniin Oromiyaa humnaan erga cabsanii waggaa dhibba ol ta'ee jira. Koloneeffattootni kun Oromiyaa keessa qubatan. Oromiyaa cabsuu wajjin duudhaa Oromoo fi jireenya hawaasummaa Oromoo ta'e jedhanii dhabamsiisuu irratti bobba'an. Qubattootni koloneeffattoota Abisiiniyaa, humna namaa fi qabeenya Oromiyaa qusii tokko malee walitti fufiinsaan saamaniiru. Bakkoota hedduutti Oromootni abbaa biyyaa ta'anii utuu jiranii, lafa isaanii irraa buqqaasani qubattoota irraa qubachiisan.
Gochaan mootummaan Wayyaanee amma raawwataa jiru gochaa abbootii isaa wajjin tokkicha. Waajjiroota Oromoo Finfinnee keessaa ari'uuf murteessuun dura, Oromoota Finfinnee marsanii jiraatan ta'e jedhanii lafa isaanii irraa buqqisan. Jalqaba lafa magaalaa babal'ifachuu itti aansanii ammoo Finfinnee Oromiyaa irraa muruuf karoorfatanii hojjachaa jiru.
Oromiyaa asii fi achi ciruun akka barbaadanitti bulchuun tooftaa qoqqoodanii bituu mootummootni Itoophiyaa dhufaa darba itti dhimma bahaa yoona gahanii dha. Mootummaan Itoophiyaa amma aangoo irra jiru sabummaa Oromoo dhabamsiisuuf mala dhahachaa jira. Mala inni na gargaara jedhee yaadu tokko teessuma lafaa fi baay'ina ummata Oromoo xiqqeessuuf hojjechuu dha. Gochaa gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota irratti raawwataa jiru dugugiinsa sanyii irraa adda bahee hin ilaalamu. Oromiyaa xiqqeessuuf karaa adda addaa lafa irraa mureera. Yeroo ammaa ammoo handhuura Oromiyaa, Finfinneetti qiyyaafatee jira. Biyya abbaa keenyaa Oromiyaa ijoo bal'eessuuf gochaa sheexanummaa mootummaan Wayyaanee raawwataa jiru kun dura dhaabbatamuu qaba. Kanaaf karaa nuu danda'ame hundaan ni mormina.
Mootummootni Itoophiyaa humnaan cabsanii bittaa kolonii irratti diriirsan illee, ummatni Oromoo yeroo itti gabrummaa tole jedhee fudhate hin jiru. Diddaan ummata Oromoo itti fufe kun, sadarkaa qabsoo bilisummaa sabaatti guddatee jira. Qabsoo keenyaan mirgoota akka sabaatti yeroo dheeraaf dhabnee turre deebifachaa jirra. Diinni keenya mirgoota qabsoo keenyaan arganne sharafuuf:-
o Kaartaa Oromiyaa murmuree gara dhabasiisaa jira.
o Ummatni Oromoo akka Oromummaa hin guddifannee fi hin ijaarre gufuu ta'aa jira.
o Afaan Oromoo afaan hojii, barnootaa fi qunnamtii akka hin taane dadhabsiisaa fi dhorkaa jira.
o Akka ummatni Oromoo aadaa isaa hin guddifannee fi hin dagaagfannef maanguddoota, artiistoota fi beektoota Oromoo hidhaa, ajjeessaa fi biyyaa arihaa jira.
Injifannoolee jajjaboon kun mootummaa Itoophiyaan sharafamaa jiraatan illee, wareegama kamuu haa gaafatu malee, ittisa gochuuf waardiyyaa dhaabbachuu qabna. Finfinnee Oromiyaa irraa adda baasuuf yaaliin godhamu bifa kamiin iyyuu gochaa seeraan alaa ti. Kanaaf Oromoota hunda biratti fudhatama hin qabu.
Finfinneen mallattoo fi wiirtuu mootummaa saba Oromoo ti. Shirri har'a Finfinnee irratti jalqabame bor naannolee Oromiyaa biroo keessatti itti fufa. Kanaaf, tarkaanfii seeraan alaa mootummaan Itoophiyaa fudhataa jiru kana ammuma irraa diddaa bifa hundaa agarsiisuun harkatti rukutuun gaafatamaa fi dirqama Oromoota hunda irra jiruu dha.
Kana irraa ka'uudhaan Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) yakka mootummaan Itoophiyaa raawwata jiru kana ni balaaleffata. Karaa danda'ame hundaan qabsoo godhuun Oromiyaa ni bilisoomsina.
Dhuma irratti hawaasni addunyaa qabsoo haqaa ummatni Oromoo walabummaa Oromiyaa fi mirga hiree murteeffatnaaf adeemsisu akka deggeru Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) waamicha godha.